SpotOn uye Poynt: POS Yakabatanidzwa Kushambadzira Kwebhizinesi Diki | Martech Zone
NeChishanu, Kurume 15, 2019 NeChishanu, Kurume 15, 2019 Douglas Karr
SpotOn yakatove yakaisa zvinopfuura zviuru zvitatu zvekutengesa uye ekugadzirisa mashandiro emidziyo mumaresitorendi, vatengesi uye masalon nyika yese. Vakabatana na Poynt kupa inoshanduka poindi yekutengesa zviteshi zvinogonesa vatengesi uye varidzi veresitorendi kuti vatore ruzivo rwevatengi rwekutambira uye vagamuchire kubhadhara pacounter, kana chero kune vatengi vari.
POS Kushambadzira Maturusi
Zvishandiso zvekushambadzira zveSpotOn zvinoita kuti zvive nyore kushandisa isingachinjike nzira yekutaurirana nevatengi vako kuitira kuti vagare vachiita bhizinesi rako kazhinji uye voshandisa mari yakawanda pavanoita. Mhedzisiro mhedzisiro haisi chete hukama huri nani nevatengi vako, asi yakawedzera mari kubhizinesi rako.
Zvimiro zvekushambadzira kweSpotOn uye ekuvimbika maturusi anosanganisira kugona ku:
Tumira vatengi varipo uye ramba uchikura nekunhonga matsva ema email vatengi.
Kutaurirana nevatengi vako kuburikidza neemail, Facebook, Twitter, uye nharembozha.
Gadzira kushambadzira mameseji nekukurumidza uye nyore nepuratifomu yakavakirwa-mukati mushandirapamwe wizard.
Tumira vatengi vako nguva-dzinonzwisisika madhiri ekukurumidza kushanya
Yazvimirira mishandirapamwe yekutangisa kushanyirwa kubva kune akasiyana zvikamu zvevatengi, kusanganisira vashanyi vatsva, ako akanakisa vatengi, uye vatengi vasina kumboshanya kwekanguva.
SpotOn haingoite kuti kushambadzira manejimendi ive nyore, zvakare inokutendera iwe kuti ugadzire iyo kuvimbika mibayiro chirongwa, uye gadzirisa yako online wongororo. Kana ikashandiswa mukonisheni pamwe nemumwe, izvi zvishandiso zvevatengi zvekuita zvinopa bhizinesi rako chikuva chine simba chakanyatsobatanidzwa neiyo Checkout maitiro uye data-inotyairwa analytics.
Izvo zvinoshandura kune kugona kugona kuramba uchikura runyorwa rwevatengi uye kuunganidza data nezve avo vatengi. Sezvo yako SpotOn chikuva inounganidza yakawanda data, inozove ine simba, ichikubvumidza iwe kuti ugadzire matsva akapatsanurwa mapoka evatengi uye kugona kusvika kwavari nematanho akakwana ekutengesa.
Pamusoro pezvo, chikuva chedashboard analytics ichakubvumidza iwe kuona kujeka kujeka pakati pevatengi, zvavanoita, uye ako mishambadziro ekushambadzira, achikupa yakajeka ROI yako ekushambadzira kuyedza. Mune mamwe mazwi, SpotOn inotora fungidziro kunze kwekushambadzira. Iwe unozonyatsoziva zvirikushanda, uye maitiro ekugadzira zvakatonyanya mushandirapamwe wekushambadzira mune ramangwana.
Nezve SpotOn Transact, LLC
SpotOn Transact, LLC ("SpotOn") ndeye yekucheka-kumucheto kubhadhara uye software kambani inotsanangura patsva mutengesi masevhisi indasitiri. SpotOn inounza pamwechete kubhadharisa kugadzirisa uye vatengi vanobata software, ichipa vatengesi data rakapfuma uye maturusi anovapa simba rekushambadza zvakanyanya kune vatengi vavo. Chikuva cheSpotOn chinopa maturusi akazara emabhizimusi madiki nepakati, zvinosanganisira kubhadhara, kushambadzira, ongororo, analytics uye kuvimbika, zvinotsigirwa neindasitiri-inotungamira kuchengetedza kwevatengi. Kuti uwane rumwe ruzivo, shanya KuraIi.com.
Nezve Poynt, Inc.
Poynt yakabatana yekutengesa chikuva
kupa vatengesi simba nehunyanzvi hwekushandura mabhizinesi avo. Muna 2013, kambani yakaziva kushayikwa kwema smart terminals mumusika, uye yakafungidzira zvakare ubiquitous mubhadharo terminal mune yakabatana, yakawanda-chinangwa chishandiso inomhanya yechitatu-bato
maapp. Sezvo zvivakwa zvine hungwaru zvikave zvakajairika, Poynt OS iri yakavhurika sisitimu inoshanda iyo inogona kusimbisa chero smart smart yekubhadharisa pasirese, ichigadzira nyowani yeupfumi hupfumi hwevatengesi uye ichibvumira vanogadzira kunyora kamwe uye nekuparadzira kwese kwese. Poynt inotungamirwa
muPalo Alto, Calif., ine dzimbahwe repasi rose muSingapore, uye inotsigirwa naElavon, Google Ventures, Matrix Partners, National Australia Bank, NYCA Partners, Oak HC / FT Partners, Stanford-StartX Fund, uye Webb Investment Network. Tsvaga zvimwe pa
Tags: Mobile Anwendungkubhadhara kubhadharapoindi yekutengesapos mamesejipoyntpoynt posspoton